चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ काठमाडौँमा,राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा स्वागत - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ काठमाडौँमा,राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा स्वागत
काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ काठमाडौँ आइपुगेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको औपचारिक निमन्त्रणामा उनी नेपाल आएका हुन् । राष्ट्रपति सी दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि दिउँसो ४ बजेर १० मिनेट जाँदा विशेष विमानमार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरे ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी विमानस्थलमा उत्रेलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विमानस्थलमै स्वागत गरेकी छन् । राष्ट्रपति सी को स्वागतका लागि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत मन्त्रीहरु, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुसमेत विमानस्थल पुगेका छन् ।
स्वागत लगत्तै राष्ट्रपति सीको सम्मानमा नेपाली सेनाबाट विमानस्थलमै सम्मानगारत (गार्ड अफ अनर) अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई विशेष स्वागत र सम्मानको सन्देश दिन विमानस्थलमै गार्ड अफ अनरको कार्यक्रम राखेर त्यहीं कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको टोली उपस्थित भएको हो ।
शुक्रबार राष्ट्रपति सी, विदेशमन्त्री वाङ यी र स्टेट काउन्सिलर याङ जिएछीसहितका ९० सदस्यीय टोली भारत भ्रमणमा गएको थियो । शनिबार दिउँसो २ बजे उक्त टोली भारतको चेन्नईबाट नेपाल प्रस्थान गरेको थियो ।
नेपाल आउनुअघि राष्ट्रपति सीले भारतको तमिल नाडुस्थित मामल्लपुरममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग करिब ४० मिनेट छलफल गरेका थिए ।
आजै राष्ट्रपति भण्डारी र सीबीच साढे ६ बजे शितल निवासमा भेटवार्ता हुनेछ ।
इङ्ग्ल्यान्डलाई पराजित गर्दै बेल्जियम समूह विजेता
काठमाडौं । रुसमा जारी फिफा विश्वकफ फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहिबार राती भएको समूह समूह जीको खेलमा […]
गंगामायाले पूर्ण न्याय नपाई अनशन नतोड्ने
काठमाडौं । छोराका हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै ४६ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेकी गंगामाया अधिकारीले […]
दोहास्थित नेपाली दुतावासमा उत्प्रेरणात्मक योग शिविर
कतार । कतारको दोहा स्थित नेपाली दुतावासमा एक उत्प्रेरणात्मक योग शिविर सम्पन्न भएको छ । संस्कार नेपाल तथा […]
१६ औँ पटक अनसनरत गोविन्द केसीको स्वास्थ्यमा दोस्रो दिनदेखि नै समस्या
इलाम । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै १६ औँ पटक अनसन बसेका प्रा. डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यमा समस्या […]